Xaalka Qudus: Qarammada Midoobay oo ku gacansayrtay go’aankii Trump – Kasmo Newspaper
Xaalka Qudus: Qarammada Midoobay oo ku gacansayrtay go’aankii Trump
Updated - December 21, 2017 10:27 pm GMT
London (Kasmo), Fadhiga Golaha Guud (General Assembly) ee Qarammada Midoobay ayaa galinkii dambe ee maanta oo Khamiis ah, aqlabiyad buuxda ku gudbiyay Qaraar looga soo horjeedo go’aankii Trump ee 6dii Disembar ugu aqoonsaday Qudus Caasimadda Israel.
Qaraarka looga soo horjeedo Maraykanka, oo ku hanjabay in uu ka aarsana doono dalalkii ka hor imaada, waxaa oggolaatay 128 dal oo ay ku jiraan kuwa ugu muhiimsan Midowga Yurub.
Waxaa diiday 9 dal oo qur ah, (Guatemala, Honduras, Marshall Islands, Micronasia, Nauru, Palau, Togo iyo dabcan Israel iyo USA), waxaana ka aamusay 35 dal oo ay ka mid yihiin (Australia, Canada, Argentina, Poland, Romania, Filibbiin iyo Colombia).
Codbixinta Golaha Guud, si ka duwan midda Golaha Ammaanka, ma lahan sifo sharci ahaan wax jidaynaysa, laakiin waxay leedahay culays siyaasadeed oo lixaad leh.
Dibolomaasiyiin badan oo hadlay codbixinta ka hor ayaa caro ka muujiyay cadaadiska Maraykanku ugu hanjabay in uu deeqaha ka jari doono dalalkii aan mowqifkiisa taageerin.
Isniintii, 18kii Disembar 2017, Maamulka Madaxweyne Trump ayaa diidmada qayaxan (Veto) ku horjoogsaday Qaraar dalka Masar soo gudbiyay oo lagu dhaleecaynayay go’aankii Maraykanka, kaas oo 14kii kale ee xubnaha Golaha Ammaanku taageereen.
Afhayeen u hadlay Madaxtooyada Falastiin, Nabil Rdainah, wuxuu caddeeyay in codbixinta Golaha Guud tahay guul u soo hoyatay shacabka reer Falastiin, lagana sii wadi doono ololaha fagaarayasha Caalamiga ah, si loo soo afjaro gumaysiga Israel.
Anton Salman, Duqa Baytulaxam oo isagu masiixi ah ayaa uga mahad celiyay dhammaan dalalkii u codeeyay si ay u taageeraan Dawladnimada Falastiin iyo qaddiyadda nabadda.